Jiromanga mody - ririnina 2015-2016
Ny iray amin'ny akanjo am-pitiavana sy mahasoa indrindra amin'ny ririnina dia jiro. Io akanjo io dia aseho amin'ny modely amin'ny fomba rehetra, izay mahatonga izany tsy vitan'ny hoe manao safidy mifototra amin'ny fepetra tsirairay, fa koa mamorona sary tsy mahazatra ho an'ny toe-javatra sy toe-javatra rehetra. Manomboka amin'ny vanim-potoana mankany amin'ny vanim-potoana, ireo mpahaikanto dia manolotra ireo endrika vaovao tsy mahazatra. Ny fironana modely amin'ny jirom-bolo amin'ny fararano-ririnina 2015-2016 - ny fampiharana, ny fahamendrehana, ny kalitao mifandraika amin'ny lamaody maoderina sy ny endrika tsy mahazatra.
Jiromy mafana mahazatra - fararano-ririnina 2015-2016
Amin'ny vanim-potoana vaovao, ireo teknisiana dia manantitrantitra voalohany amin'ny fitarihana ny vehivavy sy ny hakantony. Ireo toetra ireo dia ireo novokarin'ny akanjo mafana, naseho tao amin'ny fanangonana lamaody tamin'ny fararano-ririnina 2015-2016. Raha mampiaraka ny lamaody sy ny fahaizanao ny sary anao, dia azo antoka fa hahatsapa ianao fa azo antoka, matoky ary hizatra ny fironana farany amin'ny lamaody. Andeha hojerentsika hoe karazana akanjo ho an'ny vehivavy ve ny mody amin'ny ririnina 2015-2016?
Fipoakan'ny lamaody - ririnina-ririnina 2015-2016 . Ny maodely indrindra isan'andro dia mipoitra ireo jaky. Ny akanjo toy izany dia asehon'ny karazan'asa samihafa. Ny ririnina indrindra amin'ny ririnina 2015-2016 dia ho modely goavam-be amin'ny akanjo lava, akanjo vita amin'ny kofehy marevaka, ary fohy ihany koa ny fohy.
Akanjo jiro hoditra - ririnina-ririnina 2015-2016 . Ny vokatra vita amin'ny hoditra dia milamina foana. Noho izany, ny mpanamboatra dia manolotra modely hoditra ho an'ny fotoana rehetra. Ny akanjo hoditra fararano-ririnina 2015-2016 dia malaza amin'ny fahatongavan'ireo andro mangatsiaka. Raha ny marina, ireo mpamolavola dia nanolotra modely tsara ho an'ny daholobe. Ny jiromotra miloko marevaka indrindra avy amin'ny hoditra sy modely vita amin'ny hoditra. Nampiasa ny hoditra voajanahary sy artifisialy ny mpanamboatra lamaody any amin'ny fanangonana vaovao. Ny modela miaraka amin'ny rongony osy, raccoon, fox dia tena mangataka.
Ny jaky mody avy amin'ny textile fall-ririnina 2015-2016 . Mbola eo an-tampon'ireo lazan'i Kazuel ireo valan-javaboary. Ankoatra izany, ny jirom-boninahitra an-jatony amin'ny hoditra, ary koa ny modely misy volom-borona. Na izany aza, rehefa mifidy karazan-tsoratra amin'ny tapa-kazo, dia ilaina ny mitadidy fa tsy mahasoa izy ireo mandritra ny andro mafana.
Loko volomparasy amin'ny akanjo - fararano-ririnina 2015-2016
Na dia eo aza ny zava-misy amin'ny fomba lamaody mazava, araka ny designer, amin'ny ririnina 2015-2016 lamaody lamaody dia milamina mangina. Raha tianao ny modely loko, dia tokony hifantoka amin'ireo loko marevaka ianao - kaki, bordeaux, mavo.
Miorina amin'ny fantsika fohy 2013
Marina Rinaldi - Autumn-Winter 2016-2017
Ririnina hoditra 2015
Office Fashion 2015
Ahoana no anaovana ny tatoazy amin'ny taovolo?
Korzhiki - resipe
Ny renim-pianakaviana Lucy Lew dia mbola tsy mamela ireo mpitsikera matory
Vokatry ny legioma ho an'ny fetin'ny fararano
Ahoana no hikarakarana marika amin'ny antsantsa?
Julienne miaraka amin'ny akoho sy holatra - fomba mahazatra
Manasa ny volo maitso amin'ny hoditra ve ny rano?
Fanesorana ny labia
Mampalahelo ny vavony mandritra ny fitondrana vohoka
Headscarves - ririnina
Ny Rahavavy Hadid, Ashley Graham sy ny hafa dia nanolotra ny fanangonana an'i Prabal Gurung tao amin'ny Fashion Week tany New York
Wall Closing Dryer
Iza no mpitsabo efa 3 volana?
Fitrandrahana rano anaty rano